Kooxda Chelsea oo lagu wado inay maanta oo Isniin ah si rasmi ah ugu dhawaaqdo heshiiska tababaare Antonio Conte, kaasoo London ku sugan – Gool FM
(London) 04 Abriil 2016 – Tababaraha xulka qaranka Talyaaniga ee Antonio Conte ayaa gaaray magaalada London, waxaana la sheegayaa in maanta oo Isniin ah uu saxiixi doono heshiiska uu shaqada tababarenimo ee kooxda Chelsea uu kula wareegi doono.
Sida ay sheegayaan saxaafadda Ingiriiska iyo kuwa Talyaaniga tababare Antonio Conte ayaa gaaray magaalada London si uu u dhamaystiro heshiiska uu shaqada Chelsea kula wareegi doono, iyadoo la filayo inay Chelsea si rasmi ah ugu dhawaaqdo maanta in Conte uu yahay tababarahooda rasmiga ah.
Inkastoo Antonio Conte bilihii dhawaa la la xiriirinayey shaqada garoonka Stmafrod Bridge ayaa haatan waxa uu u muuqdaa mid qarka u saaran inuu shaqada tababarenimo ee Blues kala wareego macallinka aan joogtada ahayn ee Guus Hiddink, kaasoo shaqada Chelsea soo hayay tan iyo markii Jose Mourinho laga cayriyey kooxda.
Tababaraha xulka Azzurri ayaa marka hore soo dhamaysan doona tartanka qarammada Yurub ee Euro 2016, isagoo door wayn ku yeelan doona dib u dhiska kooxda Chelsea, marka uu si buuxda ula wareego shaqada tababaranimo ee Chelsea.
Conte ayaa hore guulo waa wayn ula soo gaaray kooxda Juventus ka hor intii uusan shaqada kooxdaas iska casil sanadkii 2014-kii.
"Aad ha u riyoonina," Wenger oo u digay Arsenal